Ciidamada Ammaanka Oo Gacanta Ku dhigay Miino Iyo Dadkii Ku Lugta Lahaa – Radio Muqdisho
Ciidamada Ammaanka Oo Gacanta Ku dhigay Miino Iyo Dadkii Ku Lugta Lahaa
Guddoomiyaha Degmada Howlwadaag Axmed Nuur Cabdi Siyaad “Anas” oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in gacanta ku dhigeen saddex nin iyo walxaha qarxa oo ay uga carareen jidka hareerahiisa, kadib markii dadka deegaanka ay ku soo wargeliyeen in jidka la dhigay walxaha qarxa.
Guddoomiyuhu waxa uu tilmaamay in ciidanka amniga ay ku wargeliyeen arrinta, isla markaana lagu guuleystay in la qabto saddex ruux oo lagu tuhmayo inay iyagu wateen walxaha qarxa oo ku jiray jawaanno, waxaana uu intaa ku daray in ciidanka ay la wareegeen saddexda ruux ee la qabtay.
“Dadka deegaanka ayaa nagu soo wargeliyay, in walxaha qarxa, gaar ahaan miinada dhulka lagu aaso ay kuwa watay dhigeen jidka ka yimaada dabka ee dhanka Howlwadaag xageeda soo aadda, runtii arrinta durbadiiba waan ku baxnay, ciidanka miinada qaabilsan ayaan u dirnay, waxaana lagu guuleystay in miinada ay ciidamadu la wareegaan iyo saddex qof oo arrintaasi lala xiriirinayo” ayuu yiri Axmed Nuur Cabdi.
Guddoomiyaha Degmada Howlwadaag ayaa uga mahadceliyay shacabka halkaasi ku nool sida ay ula shaqeeyaan mar waliba maamulkooda, isagoo tilmaamay in ay abaal marino gaar ah siin doonaan dadkii arrintaasi gacan ka geystay oo ka hortagay in miinooyinka ay Shabaabku wateen lagu dhibaateeyo dad rayid ah.
“Mar waliba ciidamada gacan ayay ku siiyaan shacabka degmada sidii loo fashilin lahaa dhagarta ay maleegayaan Shabaab, runtii waa arrin lagu farxo in shacabka ay xilligan u heelanyihiin la shaqeynta maamulkooda iyo ciidanka, anaguna waxaan ku dadaaleynaa sidii aan u siin lahayn abaal marino, gaar ah dadkii arrintaasi gacan nagu siiyay” ayuu hadalkiisa ku daray Guddoomiye Axmed Nuur.
NUSOJ oo cambaareeysay falka lagu dhaawacay Wariye Farxaan Suleymaan
Wasiirka arrimaha gudaha oo ku wajahan Cadaado